ရည်မှန်းချက်များ စီမံခန့် ခွဲခြင်း - Myanmar Network
ရည်မှန်းချက်များ စီမံခန့် ခွဲခြင်း
Posted by Myanmar Network Forum Moderator3 on August 15, 2016 at 14:21 in သုတ/ရသ ဆောင်းပါးများ
ကွန်တော်တို့ လူငယ်အားလုံးမှာ ရည်မှန်းချက်ကိုယ်စီရှိကြပါတယ်။ တစ်နေ့ ကြရင်ဘာကြီးဖြစ်ရမယ်ပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့်ခိုင်မာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေတော့မဟုတ်ကြပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ဟာ အသက်ကြီးလာလေလေ ရည်ရွယ်ချက်တွေများပြားရှုပ်ထွေးလာလေဖြစ်ပါတယ်။ လူငယ်တော်တော်များများဟာ ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုကိုချမှတ်ပါဆိုရင် ငွေအမြောက်အများရနိုင်တဲ့ အလုပ်တစ်ခုရနိုင်တဲ့ပညာရပ်တစ်ခုကိုပဲ ရည်ရွယ်ချက်အဖြစ်ထားရှိကြတာတွေ့ ရပါတယ်။ တကယ်တမ်းဝါသနာပါသလားဆိုတော့လဲ မပါပါဘူး။
ကျွန်တော်တို့ ဒီကမ္ဘာပေါ်ကဘယ်ပညာရပ်မဆို အသုံးမ၀င်တာမရှိပါဘူး။ သင်ဟာ ပညာရပ်တစ်ခုကို စီးပွါးရေးအတွက်ပဲရွေးချယ်ချင်တာလား၊ ကိုယ်တကယ်ဝါသနာပါတဲ့ပညာရပ်ကိုပဲ ရွေးချယ်ချင်တာလား ဆိုတာ မိမိကိုယ်ကို ပြန်မေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ လူငယ်တော်တော်များများမှာ လူမှန်းသိတတ်စအရွယ်ကတည်းက ရည်ရွယ်ချက်ကိုယ်စီရှိကြပါတယ်။ အချို့ လူငယ်လေးတွေက ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တယ်၊ အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ချင်တယ် စသဖြင့်ပေါ့။ ဒါပေမယ့်လဲအကြောင်းကြောင်းကြောင့် မိမိပန်းတိုင်တွေနဲ့ လွဲခဲ့ ရတာတွေလဲရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတိုင်းမှာ အစားထိုးပန်းတိုင်ဆိုတာရှိပါတယ်။ ဆရာအောင်သင်းပြောသလို ပါပဲ “မင်းဟာ အသံမကောင်းလို့ အဆိုတော်တစ်ယောက် မဖြစ်နိုင်ပေမယ့်… အကောင်းဆုံး တေးရေးဆရာတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်” ။ ဥပမာပြောရလျှင် ဆရာဝန်အရမ်းဖြစ်ချင်တဲ့လူငယ်လေးတစ်ယောက်ဟာ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ဆယ်တန်းမှာ အမှတ် မမှီခဲ့ရင်တောင် သူ့ ရဲ့ စစ်မှန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်က လူ့ အသက်ကိုကယ်ဖို့ ဖြစ်တဲ့အတွက် ခန္ဓာဗေဒနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဘာသာရပ်ကိုဖြစ်ဖြစ် ဒါမှမဟုတ် သူနာပြုတက္ကသိုလ်ကိုဖြစ်ဖြစ်လျှောက်ထားပြီး ပညာရှင်ဖြစ်သည်အထိကြိုးစားနိုင်ပါတယ်။
ရည်မှန်းချက်ကိုချမှတ်ရာမှာ ကိုယ်တကယ်စိတ်ပါဝင်စားရာကိုသာ ချမှတ်သင့်ပါတယ်။ သင်ဘာကို ရည်မှန်းချက်ထားရမလဲဆိုတာမသိဖြစ်နေပါသလား? ဒါဆို သင်စာများများဖတ်ပေးပါ။ စာဖတ်ရာမှာလဲ နယ်ပယ်စုံအောင်ဖတ်ပေးပါ။ စာတွေများများဖတ်လာတဲ့ အခါ သင်တကယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ အကြောင်းအရာနယ်ပယ် ကို သင်ကိုယ်တိုင်မသိလိုက်ပဲ ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ အချိန်ကြာလာတဲ့ အခါ သင်ကိုယ်တိုင် ဘာကိုစိတ်ပါဝင်စားတယ်ဆိုတာ သိလာပါလိမ့်မယ်။ အချို့ လူငယ်တွေက သူတို့ စိတ်ပါဝင်စားတဲ့ နယ်ပယ်က မချမ်းသာနိုင်တဲ့အတွက် မိမိ စိတ်ပါဝင်စားတဲ့အရာကို စွန့် လွှတ်ပြီး ငွေနောက်ကိုလိုက်မိတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်လိုက်တဲ့အတွက် နောက်ပိုင်းမှာ စိတ်ပါဝင်စားသွားရင် ဘာမှမဖြစ်သော်လည်း စိတ်ပါဝင်စားမှုမရှိရင်တော့ရည်မှန်းချက်ပျောက်ပြီး ဘ၀ဟာ အဓိပ္ပါယ်မရှိသလို ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်ပညာရပ်နယ်ပယ်မဆို မချမ်းသာနိုင်တာ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အကန့် အသတ် တစ်ခုတော့ရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ သင်ဟာ လက်ရှိသင်စိတ်ပါဝင်စားတဲ့ ပညာရပ်နယ်ပယ်နဲ့ လုပ်ကိုင်ရင်းအမှန်တကယ် ချမ်းသာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ သင်ကိုယ်တိုင် သင့်ပညာရပ် နယ်ပယ်မှာ အထူးကျွမ်းကျင်ဖို့ (ပရိုဖြစ်ဖို့ ) လိုအပ်ပါတယ်။ သင်ဒီပညာရပ်ကို လေ့လာလိုက်စား အသုံးချရင်းနဲ့သင်မအောင်မြင်သေးဘူးလား? မချမ်းသာသေးဘူးလား? သေချာပါတယ်။ ဒါဆိုသင် ဒီပညာရပ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သင့်မှာအရည်အချင်းမပြည့်မှီသေးလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ သင်က အခု ဒီပညာရပ်တစ်ခုကို ဆင်းဆင်းရဲရဲ လေ့လာနေရချိန်မှာ သင့်သူငယ်ချင်းက အခြားပညာရပ်တစ်ခုနဲ့ချမ်းသာနေပါသလား? သင်အားကျလို့ ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရည်ရွယ်ချက်ကိုတော့ပြောင်းပစ်စရာမလိုပါဘူး။ သူတကယ်အောင်မြင်နေတယ်ဆိုတာကလဲ သင့်သူငယ်ချင်းက သူ့ ပညာရပ်နယ်ပယ်မှာ တစ်ဖက်ကမ်းခပ်အောင် ကျွမ်းကျင်နေလို့ လဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သလို ကံကောင်းနေတာလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ရည်မှန်းချက်ရွေးချယ်တဲ့ နေရာမှာ ထားရမယ့် စိတ်နေသဘောထားလေးတစ်ခုတော့ရှိပါတယ်။ သင်ဟာ ရည်မှန်းချက်တစ်ခုကို ချမှတ်ပြီးပြီဆိုရင် အဲ့ရည်မှန်းချက်ကြောင့် သင်အနေဆင်းရဲ အစားဆင်းရဲဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်၊ သူများတွေ ၀တ်စားသလို ၀တ်စားချင်မှဝတ်စားနိုင်မယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီ ဒဏ်ကို ခံမယ်၊ အဲဒီဒုက္ခတွေကို ရအောင် ကျော်ဖြတ်မယ် ဆိုတဲ့စိတ်ဓါတ်မျိုး သင့်မှာရှိရပါမယ်။ သင့်သူငယ်ချင်းတွေက အခြားပညာရပ်တစ်ခုနဲ့ အောင်မြင်နေချိန်မှာ သင့်စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာမယ့် “ငါ့ ၀ါသနာကြီးက မှားများမှားနေပြီလား? ငါလမ်းမှားရောက်နေပြီလား? ငါလေ့လာလိုက်စားနေတဲ့ပညာရပ်က သူတို့ လေ့လာနေတဲ့ပညာလောက်ရော အသုံးဝင်ရဲ့ လား?” ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးတွေကို “ငါဘာလို့ မအောင်မြင်ရမှာလဲ? ငါလေ့လာနေတဲ့ ပညာရပ်တွေက သူ တို့ ထက်ခက်လို့ နေမှာပေါ့။ ငါ့ပညာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ငါဘာတွေထပ်လေ့လာရဦးမလဲ? အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေကို ဘယ်လို ရှာရမလဲ?” အဲဒီလိုအတွေးမျိုးနဲ့ အစားထိုးပစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုတွေးနိုင်ဖို့ ဆိုတာကလဲ သင်တကယ်ဝါသနာပါတဲ့ ပညာရယ်နယ်ပယ်ကို ရည်မှန်းချက်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ မိမိရည်မှန်းချက်ကို ရွေးချယ်ပြီးပြီဆိုရင်လဲ အလွယ်တကူ လက်မလျော့ သင့်ပါဘူး။ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ကြိုးစားကြည့်သင့်ပါတယ်။ လူတိုင်းကတော့ အသက်ကြီးလာတာနဲ့ အမျှ ပိုကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကို ပြောင်းသွားနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်ပညာရပ်မဆို အခက်အခဲကတော့ရှိနိုင်ပါတယ်။ အလွယ်တကူ အလျှော့မပေးဖို့ တော့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ၀ီရိယဆိုတဲ့အရာကို “မိမိရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အား ဆွေမျိုးသားချင်းကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ မိဘကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ ချစ်သူကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ မည့်သည့်အကြောင်းကြောင်းနဲ့ မှ လက်လွှတ်အဆုံး အရှုံး မခံတဲ့သတ္တိ” လို့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ပါတယ်။
ရည်မှန်းချက်တစ်ခုကိုအတိအကျချမှတ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ ဒီရည်မှန်းချက်နဲ့ ပတ်သက်တာကိုပဲ အာရုံစိုက်သင့်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မုန့် ဆိုင်တွေမှာ မုန့် တွေအများကြီးတင်ထားသလိုပါပဲ။ စားသုံးသူဟာ မုန့် တွေများကြီးတွေ့ တဲ့ အခါ ဟိုဟာလဲစားချင် သည်ဟာလဲစားချင်ဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးဘယ်ဟာမှ မစားနိုင်တော့သလိုဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် များများသိတာ အချို့ နေရာတွေမှာကောင်းသလို အချို့ နေရာတွေမှာလဲ မကောင်းနိုင်ပါဘူး။
သင်ဟာ သင့်ရည်မှန်းချက်ကို ယခုလောလောဆယ်ရှာမတွေ့ သေးဘူးဆိုရင်တော့ အင်္ဂလိပ်စာကို ကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ထားသင့်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သင်နောက်ပိုင်းလေ့လာမယ့် ဘယ်ဘာသာရပ်မဆို အင်္ဂလိပ်လိုလေ့လာရမှာဖြစ်တဲ့ အတွက် သင့်အတွက် အကျိုးမယုတ်ပါဘူး။ နောက်ထပ်အရေးကြီးတာတစ်ခုကတော့ သင့်မှာ ယခု တက္ကသိုလ်လည်းတက်နေတယ် ရည်ရွယ်ချက်လဲမရှိဖြစ်နေတယ်ဆိုလျှင် ရှေးဦးစွာ အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်တဲ့သင် သင်ယူနေရတဲ့ ဘာသာရပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အရင်လေ့လာကြည့်ပါ။ သင့်ဘာသာရပ် အကြောင်းကို လေ့လာလေလေ ဒီဘာသာရပ်အကြာင်းကို ပိုသိလာလေလေ။ ဒီဘာသာရပ်အကြောင်းကို သင်သိလာလေလေ ဒီဘာသာရပ်ကို တဖြည်းဖြည်းစိတ်ဝင်စားလာလေလေ။ ဒီ ဘာသာရပ်ကို ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားလာလေလေ ပိုလေ့လာဖြစ်လေလေ။ နောက်ဆုံးမှာတော့ သင်ဟာ ဒီဘာသာရပ်မှာ အတော်ဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
အချို့ လူငယ်တွေက အချိန်လွန်မှ မိမိတကယ်ဝါသနာပါတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုကို ရှာတွေ့ မိလေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒီအတွက် သူုတို့ မှာ ယူကျုံးမရဖြစ်ပြီး အဲဒီ့ရည်ရွယ်ချက်ကို စွန့် လွှတ်လိုက်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါဟာလုံးဝမှားယွင်းပါတယ်။ မိမိတကယ်စိတ်မပါတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေမယ့်အစား တကယ်စိတ်ပါတဲ့အရာကိုလုပ်ရတာက ဘ၀ကိုပိုပြီး အဓိပ္ပါယ်ရှိသွားစေပါတယ်။ မိမိဝါသနာမပါတဲ့အလုပ်နဲ့ အောင်မြင်ခဲ့ ရင်တောင် စစ်မှန်တဲ့ အပျော်ကိုရရှိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဘယ်အရာမဆိုနောက်ကျတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုအချိန်မှာတော့အခြားသူတွေထက် ပိုမိုအားစိုက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အခြားသူတွေက ဒီပညာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အချိန် တစ်နာရီပေးတဲ့ အချိန်မှာ သင်က သုံးနာရီ၊ လေးနာရီလောက်တော့အချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ်အရေးကြီးတာတစ်ခုကတော့ လူတော်တော်များများက ရည်မှန်းချက်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကိစ္စတွေမှာတောင် အဖော်မင်တတ်ကြပါတယ်။ ဥပမာ မိမိ ဘာသာရယ်နယ်ပယ်နဲ့ ဆိုင်တဲ့ သင်တန်းသွား တက်ဖို့ ကို သူငယ်ချင်းမပါလို့ သွားမတက်ဖြစ်တာမျိုးတို့ ၊ မိမိနဲ့ အတူလေ့လာမယ့် သူငယ်ချင်းမရှိတာမျိုးတို့ ကြောင့် မလုပ်ဖြစ်၊ မလေ့လာဖြစ်တာမျိုးတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ စဉ်းစားစရာအချက်အလက်တွေက နိုင်ငံရပ်ခြားက ပညာရှင် အဖွဲ့ အစည်းတွေကရော လူညီနေတာလား။ သူတို့ က ၀ါသနာတူသူငယ်ချင်းတွေကိုပဲ ငယ်ငယ်ကတည်းကရွေးပေါင်းတာလားဆိုတာ စဉ်းစားစရာဖြစ်လာပါတယ်။ တကယ်တော့ လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ထက်အားသာတဲ့အချက်က သူတို့ က သူတို့ ရည်မှန်းချက်ကို ပထမဦးစားပေးပြီးမှ ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေကို ဆက်လုပ်တာပါ။ သူတို့ အားလုံးဟာ တစ်ဦးတစ်ယောက်ထဲ လေ့လာတဲ့သူတွေပါပဲ။ ဒီပညာရပ်ကိုလေ့လာရင်းလေ့လာရင်းနဲ့ဝါသနာတူတွေ တစ်နေရာမှာ စုမိတဲ့ အခါ အသင်းအဖွဲ့ တစ်ခုဖြစ်လာတာပါ။ ပုံမှန်ဒီပညာရပ်နဲ့ ဆိုင်တဲ့ ဟောပြောပွဲတွေသွားတာ၊ သင်တန်းတွေတက်တာ၊ ပြပွဲတွေသွားတာ စသဖြင့်ပါပဲ။ သူတို့ နဲ့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူငယ်တွေနဲ့ ကွာခြားသွားတာ တစ်ခုတော့ ရှိပါတယ်။ သူတို့ က တစ်နေ့ ကို ဒီပညာရပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အချိန် တစ်နာရီလေ့လာမယ်ဆိုရင် နေ့ စဉ်တစ်နာရီရအောင်လေ့လာပါတယ်။ သူတို့ လဲ အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ ကိုယ်တိုင် လေ့လာရာကနေ ကျွမ်းကျင်လာသူတွေရှိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာသာ ဘွဲ့ ရတွေများနေတာပါ။ နိုင်ငံခြားမှာက အထက်တန်းကျောင်းအောင်ရုံလောက်နဲ့ကျောင်းပြီးသွားကြတဲ့သူတွေအများကြီးပါ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ အရည်အချင်းကို အထင်သေးလို့ မရပါဘူး။ အဓိကမြန်မာတွေပြုပြင်ရမယ့်အချက်က ‘စိတ်ကူးပေါက်မှ ထလုပ်တတ်တဲ့အကျင့်’ ပါ။ သင်ဟာ သင်တစ်ကယ်ဝါသနာပါလို့ ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ဒီပညာရပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တစ်နေ့ ကို အနည်းဆုံး နာရီဝက်၊ တစ်နာရီ လောက်တော့ အချိန်ပေးလေ့လာသင့်ပါတယ်။ အဓိကက စာဖတ်ဖို့ ပါပဲ။ စာအုပ်တွေထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ သိချင်တာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
လူတိုင်းမှာ ကုသိုလ်ကံ အကျိုးပေးဆိုတာရှိပါတယ်။ အတိတ်ဘ၀က ကုသိုလ်ကံကို ကျွန်တော်တို့ ဘာမှပြောင်းလဲလို့ မရနိုင်ပေမယ့်။ အနာဂတ်ကိုတော့ မိမိဘာသာဖန်တီးလို့ ရနိုင်ပါတယ်။ ကံဆိုတာအလုပ်ပါပဲ။ ကိုယ်အောင်မြင်ဖို့ အတွက် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်မှရမှာပါ။ အဲဒီတော့ သင်ဟာ တိကျတဲ့ ရည်မှန်းချက်တစ်ခု ချမှတ်ပြီးပြီဆိုရင် အဲ့ ဒီရည်မှန်းချက်ကိုဘယ်တော့မှမမေ့အောင် သင်မြင်သာတဲ့နေရာမှာ သတိပေးစာတိုလေးတွေအနေနဲ့အမြဲတမ်းထားရှိပါ။ ဥပမာ- သင့်ရဲ့စာကြည့်စားပွဲမှာ ကပ်ထားတာတို့သင့်ရဲ့ဖုန်း ဝေါလ်ပေပါ(Wallpaper) မှာ တင်ထားတာတို့အဲ့ဒီလို အမြဲသတိ တရဖြစ်နေစေဖို့ လုပ်ပေးပါ။ နေ့ စဉ် မနက်တိုင်း သင့်ရည်ရွယ်ချက်ကို အကြိမ်ရေများများ ရွတ်ပေးပါ။ ဒီလိုလုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့် သင့်ရဲ့ မသိစိတ်မှာ စွဲသွားပြီး သင့်ကို တွန်းအားအမြဲပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရည်မှန်းချက်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့တစ်နှစ်စာ၊ တစ်လစာ၊ တစ်ပတ်စာ၊ တစ်ရက်စာ အစီအစဉ်တွေကို ချရေးပြီး နေ့ စဉ်ကိုယ်ဘယ်လောက်ပြီးမြောက်အောင် လုပ်လိုက်နိုင်လဲဆိုတာ ပြန်ပြီးစစ်ဆေးပါ။ ဒီလိုလုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့်သင်ဟာ သင့်ပန်းတိုင်နဲ့ တဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာပြီး နောက်ဆုံး မှာပန်းတိုင်ကိုရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ရည်မှန်းချက်အတွက် အစီအစဉ်ဆွဲပြီးရင်တော့ အတတ်နိုင်ဆုံးပြီးအောင်လုပ်ပါ။ ဥပမာ သင်ဟာ တစ်နေ့ ကို ငှက်ပျောသီး တစ်လုံးကုန်အောင် ပုံမှန် စားမယ်ဆိုရင် တစ်နေ့ တစ်လုံးပုံမှန်စားပေးပါ။ ခုနစ်ရက်လောက်နေမှ တစ်ပတ်စာ ပေါင်းစားမယ်ဆိုရင် သင်ဘယ်တော့မှ စားနိုင်တော့မှာမဟုတ်သလို သင့် အစီအစဉ်တွေကလဲ ကမောက်ကမတွေဖြစ်ကုန်တော့မှာပါ။ ဒီအခါမှာ သင့်ကိုယ်သင်လဲ လုပ်နိုင်တယ်လို့ မယုံကြည်နိုင်တော့ သလို မိမိကိုယ်ကိုလဲ အထင်သေးသွားနိုင်ပါတယ်။ လောကမှာ မိမိကိုယ်ကို အထင်သေးတာဟာ ဘာနဲ့ မှကုစားလို့ မရနိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အစီအစဉ်တစ်ခု ချမှတ်ပြီးသွားရင် အတတ်နိုင်ဆုံးပြီးအောင်လုပ်ပါ။ အကြွေးမတင်ပါစေနဲ့ ။ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကို အမြန်ရောက်ဖို့ ထက် အရည် အချင်းပြည့်မှီစွာရောက်ဖို့ ကို အာရုံစိုက်ပေးပါ။ စာဖတ်သူများလဲ ဘ၀ရဲ့ ပန်းတိုင်ကိုအမြန်ဆုံးလျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေခဗျာ။
ကှနျတျောတို့လူငယျအားလုံးမှာ ရညျမှနျးခကျြကိုယျစီရှိကွပါတယျ။ တဈနကွေ့ရငျဘာကွီးဖွဈရမယျပေါ့ဗြာ။ ဒါပမေယျ့ခိုငျမာတဲ့ရညျရှယျခကျြတှတေော့မဟုတျကွပါဘူး။ ကြှနျတျောတို့ဟာ အသကျကွီးလာလလေေ ရညျရှယျခကျြတှမြေားပွားရှုပျထှေးလာလဖွေဈပါတယျ။ လူငယျတျောတျောမြားမြားဟာ ရညျရှယျခကျြတဈခုကိုခမြှတျပါဆိုရငျ ငှအေမွောကျအမြားရနိုငျတဲ့ အလုပျတဈခုရနိုငျတဲ့ပညာရပျတဈခုကိုပဲ ရညျရှယျခကျြအဖွဈထားရှိကွတာတှရေ့ပါတယျ။ တကယျတမျးဝါသနာပါသလားဆိုတော့လဲ မပါပါဘူး။
ကြှနျတျောတို့ဒီကမ်ဘာပျေါကဘယျပညာရပျမဆို အသုံးမဝငျတာမရှိပါဘူး။ သငျဟာ ပညာရပျတဈခုကို စီးပှါးရေးအတှကျပဲရှေးခယျြခငျြတာလား၊ ကိုယျတကယျဝါသနာပါတဲ့ပညာရပျကိုပဲ ရှေးခယျြခငျြတာလား ဆိုတာ မိမိကိုယျကို ပွနျမေးဖို့လိုအပျပါတယျ။ လူငယျတျောတျောမြားမြားမှာ လူမှနျးသိတတျစအရှယျကတညျးက ရညျရှယျခကျြကိုယျစီရှိကွပါတယျ။ အခြို့လူငယျလေးတှကေ ဆရာဝနျဖွဈခငျြတယျ၊ အငျဂငျြနီယာဖွဈခငျြတယျ စသဖွငျ့ပေါ့။ ဒါပမေယျ့လဲအကွောငျးကွောငျးကွောငျ့ မိမိပနျးတိုငျတှနေဲ့လှဲခဲ့ရတာတှလေဲရှိပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ လူတိုငျးမှာ အစားထိုးပနျးတိုငျဆိုတာရှိပါတယျ။ ဆရာအောငျသငျးပွောသလို ပါပဲ “မငျးဟာ အသံမကောငျးလို့အဆိုတျောတဈယောကျ မဖွဈနိုငျပမေယျ့… အကောငျးဆုံး တေးရေးဆရာတော့ဖွဈနိုငျပါတယျ” ။ ဥပမာပွောရလြှငျ ဆရာဝနျအရမျးဖွဈခငျြတဲ့လူငယျလေးတဈယောကျဟာ အကွောငျးကွောငျးကွောငျ့ ဆယျတနျးမှာ အမှတျ မမှီခဲ့ရငျတောငျ သူ့ရဲ့စဈမှနျတဲ့ရညျရှယျခကျြက လူ့အသကျကိုကယျဖို့ဖွဈတဲ့အတှကျ ခန်ဓာဗဒေနဲ့ပတျသကျတဲ့ ဘာသာရပျကိုဖွဈဖွဈ ဒါမှမဟုတျ သူနာပွုတက်ကသိုလျကိုဖွဈဖွဈလြှောကျထားပွီး ပညာရှငျဖွဈသညျအထိကွိုးစားနိုငျပါတယျ။
ရညျမှနျးခကျြကိုခမြှတျရာမှာ ကိုယျတကယျစိတျပါဝငျစားရာကိုသာ ခမြှတျသငျ့ပါတယျ။ သငျဘာကို ရညျမှနျးခကျြထားရမလဲဆိုတာမသိဖွဈနပေါသလား? ဒါဆို သငျစာမြားမြားဖတျပေးပါ။ စာဖတျရာမှာလဲ နယျပယျစုံအောငျဖတျပေးပါ။ စာတှမြေားမြားဖတျလာတဲ့ အခါ သငျတကယျစိတျဝငျစားတဲ့ အကွောငျးအရာနယျပယျ ကို သငျကိုယျတိုငျမသိလိုကျပဲ ရောကျသှားပါလိမျ့မယျ။ အခြိနျကွာလာတဲ့ အခါ သငျကိုယျတိုငျ ဘာကိုစိတျပါဝငျစားတယျဆိုတာ သိလာပါလိမျ့မယျ။ အခြို့လူငယျတှကေ သူတို့စိတျပါဝငျစားတဲ့ နယျပယျက မခမျြးသာနိုငျတဲ့အတှကျ မိမိ စိတျပါဝငျစားတဲ့အရာကို စှနျ့လှတျပွီး ငှနေောကျကိုလိုကျမိတတျကွပါတယျ။ ဒီလိုလုပျလိုကျတဲ့အတှကျ နောကျပိုငျးမှာ စိတျပါဝငျစားသှားရငျ ဘာမှမဖွဈသျောလညျး စိတျပါဝငျစားမှုမရှိရငျတော့ ရညျမှနျးခကျြပြောကျပွီး ဘဝဟာ အဓိပ်ပါယျမရှိသလို ဖွဈသှားနိုငျပါတယျ။ ဘယျပညာရပျနယျပယျမဆို မခမျြးသာနိုငျတာ မရှိပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ အကနျ့အသတျ တဈခုတော့ရှိပါတယျ။ အဲဒါကတော့ သငျဟာ လကျရှိသငျစိတျပါဝငျစားတဲ့ ပညာရပျနယျပယျနဲ့လုပျကိုငျရငျးအမှနျတကယျ ခမျြးသာခငျြတယျဆိုရငျတော့ သငျကိုယျတိုငျ သငျ့ပညာရပျ နယျပယျမှာ အထူးကြှမျးကငျြဖို့(ပရိုဖွဈဖို့) လိုအပျပါတယျ။ သငျဒီပညာရပျကို လလေ့ာလိုကျစား အသုံးခရြငျးနဲ့ သငျမအောငျမွငျသေးဘူးလား? မခမျြးသာသေးဘူးလား? သခြောပါတယျ။ ဒါဆိုသငျ ဒီပညာရပျနဲ့ပတျသတျပွီး သငျ့မှာအရညျအခငျြးမပွညျ့မှီသေးလို့ဖွဈပါတယျ။ နောကျထပျတဈခုကတော့ သငျက အခု ဒီပညာရပျတဈခုကို ဆငျးဆငျးရဲရဲ လလေ့ာနရေခြိနျမှာ သငျ့သူငယျခငျြးက အခွားပညာရပျတဈခုနဲ့ ခမျြးသာနပေါသလား? သငျအားကလြို့ရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ရညျရှယျခကျြကိုတော့ပွောငျးပဈစရာမလိုပါဘူး။ သူတကယျအောငျမွငျနတေယျဆိုတာကလဲ သငျ့သူငယျခငျြးက သူ့ပညာရပျနယျပယျမှာ တဈဖကျကမျးခပျအောငျ ကြှမျးကငျြနလေို့လဲဖွဈကောငျးဖွဈနိုငျသလို ကံကောငျးနတောလဲဖွဈနိုငျပါတယျ။
ရညျမှနျးခကျြရှေးခယျြတဲ့ နရောမှာ ထားရမယျ့ စိတျနသေဘောထားလေးတဈခုတော့ရှိပါတယျ။ သငျဟာ ရညျမှနျးခကျြတဈခုကို ခမြှတျပွီးပွီဆိုရငျ အဲ့ရညျမှနျးခကျြကွောငျ့ သငျအနဆေငျးရဲ အစားဆငျးရဲဖွဈခငျြဖွဈမယျ၊ သူမြားတှေ ဝတျစားသလို ဝတျစားခငျြမှဝတျစားနိုငျမယျ။ ဒါပမေယျ့ အဲ့ဒီ ဒဏျကို ခံမယျ၊ အဲဒီဒုက်ခတှကေို ရအောငျ ကြျောဖွတျမယျ ဆိုတဲ့စိတျဓါတျမြိုး သငျ့မှာရှိရပါမယျ။ သငျ့သူငယျခငျြးတှကေ အခွားပညာရပျတဈခုနဲ့အောငျမွငျနခြေိနျမှာ သငျ့စိတျထဲမှာဖွဈလာမယျ့ “ငါ့ ဝါသနာကွီးက မှားမြားမှားနပွေီလား? ငါလမျးမှားရောကျနပွေီလား? ငါလလေ့ာလိုကျစားနတေဲ့ပညာရပျက သူတို့လလေ့ာနတေဲ့ပညာလောကျရော အသုံးဝငျရဲ့လား?” ဆိုတဲ့အတှေးမြိုးတှကေို “ငါဘာလို့မအောငျမွငျရမှာလဲ? ငါလလေ့ာနတေဲ့ ပညာရပျတှကေ သူ တို့ထကျခကျလို့နမှောပေါ့။ ငါ့ပညာနဲ့ပတျသကျပွီး ငါဘာတှထေပျလလေ့ာရဦးမလဲ? အခှငျ့အလမျးကောငျးတှကေို ဘယျလို ရှာရမလဲ?” အဲဒီလိုအတှေးမြိုးနဲ့အစားထိုးပဈရမှာဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုတှေးနိုငျဖို့ဆိုတာကလဲ သငျတကယျဝါသနာပါတဲ့ ပညာရယျနယျပယျကို ရညျမှနျးခကျြအဖွဈရှေးခယျြခဲ့ဖို့လိုအပျပါတယျ။ မိမိရညျမှနျးခကျြကို ရှေးခယျြပွီးပွီဆိုရငျလဲ အလှယျတကူ လကျမလြော့သငျ့ပါဘူး။ အတိုငျးအတာတဈခုအထိ ကွိုးစားကွညျ့သငျ့ပါတယျ။ လူတိုငျးကတော့ အသကျကွီးလာတာနဲ့အမြှ ပိုကောငျးတဲ့ရညျရှယျခကျြတှကေို ပွောငျးသှားနိုငျပါတယျ။ ဘယျပညာရပျမဆို အခကျအခဲကတော့ရှိနိုငျပါတယျ။ အလှယျတကူ အလြှော့မပေးဖို့တော့လိုအပျပါတယျ။ ကြှနျတျောကတော့ ဝီရိယဆိုတဲ့အရာကို “မိမိရညျမှနျးခကျြပနျးတိုငျအား ဆှမြေိုးသားခငျြးကွောငျ့သျောလညျးကောငျး၊ မိဘကွောငျ့သျောလညျးကောငျး၊ ခဈြသူကွောငျ့သျောလညျးကောငျး၊ မညျ့သညျ့အကွောငျးကွောငျးနဲ့မှ လကျလှတျအဆုံး အရှုံး မခံတဲ့ သတ်တိ” လို့အဓိပ်ပါယျဖှငျ့ပါတယျ။
ရညျမှနျးခကျြတဈခုကိုအတိအကခြမြှတျပွီးပွီဆိုရငျတော့ ဒီရညျမှနျးခကျြနဲ့ပတျသကျတာကိုပဲ အာရုံစိုကျသငျ့ပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ မုနျ့ဆိုငျတှမှော မုနျ့တှအေမြားကွီးတငျထားသလိုပါပဲ။ စားသုံးသူဟာ မုနျ့တှမြေားကွီးတှတေဲ့အခါ ဟိုဟာလဲစားခငျြ သညျဟာလဲစားခငျြဖွဈပွီး နောကျဆုံးဘယျဟာမှ မစားနိုငျတော့သလိုဖွဈသှားနိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ မြားမြားသိတာ အခြို့နရောတှမှောကောငျးသလို အခြို့နရောတှမှောလဲ မကောငျးနိုငျပါဘူး။
သငျဟာ သငျ့ရညျမှနျးခကျြကို ယခုလောလောဆယျရှာမတှသေ့ေးဘူးဆိုရငျတော့ အင်ျဂလိပျစာကို ကြှမျးကငျြအောငျလုပျထားသငျ့ပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ သငျနောကျပိုငျးလလေ့ာမယျ့ ဘယျဘာသာရပျမဆို အင်ျဂလိပျလိုလလေ့ာရမှာဖွဈတဲ့အတှကျ သငျ့အတှကျ အကြိုးမယုတျပါဘူး။ နောကျထပျအရေးကွီးတာတဈခုကတော့ သငျ့မှာ ယခု တက်ကသိုလျလညျးတကျနတေယျ ရညျရှယျခကျြလဲမရှိဖွဈနတေယျဆိုလြှငျ ရှေးဦးစှာ အနီးစပျဆုံးဖွဈတဲ့ သငျ သငျယူနရေတဲ့ ဘာသာရပျနဲ့ပတျသကျပွီး အရငျလလေ့ာကွညျ့ပါ။ သငျ့ဘာသာရပျ အကွောငျးကို လလေ့ာလလေေ ဒီဘာသာရပျအကွာငျးကို ပိုသိလာလလေေ။ ဒီဘာသာရပျအကွောငျးကို သငျသိလာလလေေ ဒီဘာသာရပျကို တဖွညျးဖွညျးစိတျဝငျစားလာလလေေ။ ဒီ ဘာသာရပျကို ပိုပွီးစိတျဝငျစားလာလလေေ ပိုလလေ့ာဖွဈလလေေ။ နောကျဆုံးမှာတော့ သငျဟာ ဒီဘာသာရပျမှာ အတျောဆုံး ပုဂ်ဂိုလျတဈယောကျဖွဈသှားနိုငျပါတယျ။
အခြို့လူငယျတှကေ အခြိနျလှနျမှ မိမိတကယျဝါသနာပါတဲ့ရညျရှယျခကျြတဈခုကို ရှာတှမေိ့လရှေိ့ကွပါတယျ။ ဒီအတှကျ သူုတို့မှာ ယူကြုံးမရဖွဈပွီး အဲဒီ့ရညျရှယျခကျြကို စှနျ့လှတျလိုကျလရှေိ့ပါတယျ။ ဒါဟာလုံးဝမှားယှငျးပါတယျ။ မိမိတကယျစိတျမပါတဲ့အလုပျကိုလုပျနမေယျ့အစား တကယျစိတျပါတဲ့အရာကိုလုပျရတာက ဘဝကိုပိုပွီး အဓိပ်ပါယျရှိသှားစပေါတယျ။ မိမိဝါသနာမပါတဲ့အလုပျနဲ့အောငျမွငျခဲ့ရငျတောငျ စဈမှနျတဲ့အပြျောကိုရရှိမှာမဟုတျတော့ပါဘူး။ ဘယျအရာမဆိုနောကျကတြယျဆိုတာမရှိပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ဒီလိုအခြိနျမှာတော့အခွားသူတှထေကျ ပိုမိုအားစိုကျဖို့လိုအပျပါတယျ။ အခွားသူတှကေ ဒီပညာနဲ့ပတျသကျပွီး အခြိနျ တဈနာရီပေးတဲ့အခြိနျမှာ သငျက သုံးနာရီ၊ လေးနာရီလောကျတော့အခြိနျပေးရမှာဖွဈပါတယျ။
နောကျထပျအရေးကွီးတာတဈခုကတော့ လူတျောတျောမြားမြားက ရညျမှနျးခကျြနဲ့ပတျသကျတဲ့ ကိစ်စတှမှောတောငျ အဖျောမငျတတျကွပါတယျ။ ဥပမာ မိမိ ဘာသာရယျနယျပယျနဲ့ဆိုငျတဲ့ သငျတနျးသှား တကျဖို့ကို သူငယျခငျြးမပါလို့သှားမတကျဖွဈတာမြိုးတို့၊ မိမိနဲ့အတူလလေ့ာမယျ့ သူငယျခငျြးမရှိတာမြိုးတို့ကွောငျ့ မလုပျဖွဈ၊ မလလေ့ာဖွဈတာမြိုးတှေ ရှိတတျပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့စဉျးစားစရာအခကျြအလကျတှကေ နိုငျငံရပျခွားက ပညာရှငျ အဖှဲ့အစညျးတှကေရော လူညီနတောလား။ သူတို့က ဝါသနာတူသူငယျခငျြးတှကေိုပဲ ငယျငယျကတညျးကရှေးပေါငျးတာလားဆိုတာ စဉျးစားစရာဖွဈလာပါတယျ။ တကယျတော့ လုံးဝမဟုတျပါဘူး။ ကြှနျတျောတို့ထကျအားသာတဲ့အခကျြက သူတို့က သူတို့ရညျမှနျးခကျြကို ပထမဦးစားပေးပွီးမှ ကနျြတဲ့ကိစ်စတှကေို ဆကျလုပျတာပါ။ သူတို့အားလုံးဟာ တဈဦးတဈယောကျထဲ လလေ့ာတဲ့သူတှပေါပဲ။ ဒီပညာရပျကိုလလေ့ာရငျးလလေ့ာရငျးနဲ့ ဝါသနာတူတှေ တဈနရောမှာ စုမိတဲ့ အခါ အသငျးအဖှဲ့တဈခုဖွဈလာတာပါ။ ပုံမှနျဒီပညာရပျနဲ့ဆိုငျတဲ့ဟောပွောပှဲတှသှေားတာ၊ သငျတနျးတှတေကျတာ၊ ပွပှဲတှသှေားတာ စသဖွငျ့ပါပဲ။ သူတို့နဲ့ကြှနျတျောတို့မွနျမာလူငယျတှနေဲ့ကှာခွားသှားတာ တဈခုတော့ ရှိပါတယျ။ သူတို့က တဈနကေို့ ဒီပညာရပျနဲ့ပတျသကျပွီး အခြိနျ တဈနာရီလလေ့ာမယျဆိုရငျ နစေ့ဉျတဈနာရီရအောငျလလေ့ာပါတယျ။ သူတို့လဲ အလုပျတဈဖကျနဲ့ကိုယျတိုငျ လလေ့ာရာကနေ ကြှမျးကငျြလာသူတှရှေိပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံမှာသာ ဘှဲ့ရတှမြေားနတောပါ။ နိုငျငံခွားမှာက အထကျတနျးကြောငျးအောငျရုံလောကျနဲ့ ကြောငျးပွီးသှားကွတဲ့သူတှအေမြားကွီးပါ။ ဒါပမေယျ့ သူတို့အရညျအခငျြးကို အထငျသေးလို့မရပါဘူး။ အဓိကမွနျမာတှပွေုပွငျရမယျ့အခကျြက ‘စိတျကူးပေါကျမှ ထလုပျတတျတဲ့အကငျြ့’ ပါ။ သငျဟာ သငျတဈကယျဝါသနာပါလို့ရှေးခယျြခဲ့တဲ့ဒီပညာရပျနဲ့ပတျသကျပွီး တဈနကေို့ အနညျးဆုံး နာရီဝကျ၊ တဈနာရီ လောကျတော့ အခြိနျပေးလလေ့ာသငျ့ပါတယျ။ အဓိကက စာဖတျဖို့ပါပဲ။ စာအုပျတှထေဲမှာ ကြှနျတျောတို့သိခငျြတာတှေ အမြားကွီးရှိပါတယျ။
လူတိုငျးမှာ ကုသိုလျကံ အကြိုးပေးဆိုတာရှိပါတယျ။ အတိတျဘဝက ကုသိုလျကံကို ကြှနျတျောတို့ဘာမှပွောငျးလဲလို့မရနိုငျပမေယျ့။ အနာဂတျကိုတော့ မိမိဘာသာဖနျတီးလို့ရနိုငျပါတယျ။ ကံဆိုတာအလုပျပါပဲ။ ကိုယျအောငျမွငျဖို့အတှကျ ကိုယျကိုယျတိုငျလုပျမှရမှာပါ။ အဲဒီတော့ သငျဟာ တိကတြဲ့ရညျမှနျးခကျြတဈခု ခမြှတျပွီးပွီဆိုရငျ အဲ့ဒီရညျမှနျးခကျြကိုဘယျတော့မှမမအေ့ောငျ သငျမွငျသာတဲ့နရောမှာ သတိပေးစာတိုလေးတှအေနနေဲ့ အမွဲတမျးထားရှိပါ။ ဥပမာ- သငျ့ရဲ့ စာကွညျ့စားပှဲမှာ ကပျထားတာတို့ သငျ့ရဲ့ဖုနျး ဝေါလျပပေါ(Wallpaper) မှာ တငျထားတာတို့ အဲ့ဒီလို အမွဲသတိ တရဖွဈနစေဖေို့လုပျပေးပါ။ နစေ့ဉျ မနကျတိုငျး သငျ့ရညျရှယျခကျြကို အကွိမျရမြေားမြား ရှတျပေးပါ။ ဒီလိုလုပျပေးခွငျးအားဖွငျ့ သငျ့ရဲ့ မသိစိတျမှာ စှဲသှားပွီး သငျ့ကို တှနျးအားအမွဲပေးနမှောဖွဈပါတယျ။ ရညျမှနျးခကျြနဲ့ပတျသကျတဲ့ တဈနှဈစာ၊ တဈလစာ၊ တဈပတျစာ၊ တဈရကျစာ အစီအစဉျတှကေို ခရြေးပွီး နစေ့ဉျကိုယျဘယျလောကျပွီးမွောကျအောငျ လုပျလိုကျနိုငျလဲဆိုတာ ပွနျပွီးစဈဆေးပါ။ ဒီလိုလုပျပေးခွငျးအားဖွငျ့သငျဟာ သငျ့ပနျးတိုငျနဲ့တဖွညျးဖွညျးနီးကပျလာပွီး နောကျဆုံး မှာပနျးတိုငျကိုရောကျရှိသှားမှာဖွဈပါတယျ။
ရညျမှနျးခကျြအတှကျ အစီအစဉျဆှဲပွီးရငျတော့ အတတျနိုငျဆုံးပွီးအောငျလုပျပါ။ ဥပမာ သငျဟာ တဈနကေို့ ငှကျပြောသီး တဈလုံးကုနျအောငျ ပုံမှနျ စားမယျဆိုရငျ တဈနတေ့ဈလုံးပုံမှနျစားပေးပါ။ ခုနဈရကျလောကျနမှေ တဈပတျစာ ပေါငျးစားမယျဆိုရငျ သငျဘယျတော့မှ စားနိုငျတော့မှာမဟုတျသလို သငျ့ အစီအစဉျတှကေလဲ ကမောကျကမတှဖွေဈကုနျတော့မှာပါ။ ဒီအခါမှာ သငျ့ကိုယျသငျလဲ လုပျနိုငျတယျလို့မယုံကွညျနိုငျတော့သလို မိမိကိုယျကိုလဲ အထငျသေးသှားနိုငျပါတယျ။ လောကမှာ မိမိကိုယျကို အထငျသေးတာဟာ ဘာနဲ့မှကုစားလို့မရနိုငျပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ အစီအစဉျတဈခု ခမြှတျပွီးသှားရငျ အတတျနိုငျဆုံးပွီးအောငျလုပျပါ။ အကွှေးမတငျပါစနေဲ့။ ရညျမှနျးခကျြပနျးတိုငျကို အမွနျရောကျဖို့ထကျ အရညျ အခငျြးပွညျ့မှီစှာရောကျဖို့ကို အာရုံစိုကျပေးပါ။ စာဖတျသူမြားလဲ ဘဝရဲ့ ပနျးတိုငျကိုအမွနျဆုံးလြှောကျလှမျးနိုငျပါစခေဗြာ။
Permalink Reply by Khin Myo Lwin on August 16, 2016 at 11:23
Permalink Reply by Jeanne on August 16, 2016 at 14:12
Permalink Reply by Sai Sai Aung Khaing Htet on August 16, 2016 at 20:58
Permalink Reply by nymyoeoo on August 17, 2016 at 9:13
Permalink Reply by Kha Mauk kalay on August 17, 2016 at 15:46
Good article!!! Hope that this will inspire many youths when they go for their ambitions.
Permalink Reply by thatpaingsoe on August 21, 2016 at 23:54
very good myamnar
Permalink Reply by Khaing Thazin Oo on August 26, 2016 at 12:03
Permalink Reply by Aung Ko Myat on August 27, 2016 at 10:56
Permalink Reply by Hsu Myat on September 2, 2016 at 23:09
Permalink Reply by Thin Thin Nwe on September 16, 2016 at 12:35
Thank u so much alarm me .Now I can't find my ambition.But I choose economic for my living.
Permalink Reply by aungzawoo on September 28, 2016 at 21:56
Permalink Reply by aungnaingthu on May 9, 2017 at 15:43